Ukukhetha Ukuzala Inja - Imibuzo Evame Ukubuzwa Yizinja
Akukho nhlobo yezinja ephelele. Zonke izinhlobo zinezinkinga. (Ngo: Okuncane )
Noma ngabe ucabanga ukuthola inja emsulwa noma ukuxubana, kufanele uthathe isikhathi sakho wenze ucwaningo ngezinhlobo zezinja.
Uma ucabanga ngokuxubeka, kuzokwenza ukusesha kwakho indawo yokuhlala kube lula kakhulu uma ucabanga 'okuthile okufana nelebhu' noma 'uhlobo oluthile lwenhlabathi.' Uzokwazi okuningi ngezinja esezihambile ekusesheni. Futhi uma ucabanga ukuthi usuvele uyazi ukuthi uluhlobo luni olufunayo, ungahle uthande ukubheka ezinye zalezi zinsiza noma kunjalo - ungathola ukuthi uhlobo oluphelele yinto obungakaze uyicabange ngaphambilini.
Kunezinhlobo ezingaphezu kuka-400 zezinja emhlabeni, futhi azikho izinhlobo ezilungele wonke umuntu.
Imibuzo Yokucatshangelwa Uma Ufuna Inja
Yibuphi ubukhulu obukufanele?
Musa nje ukucela inja 'enhle' - kwabanye abantu, lokho kusho ukuthi amakhilogremu angama-25; kwabanye kusho 75.
Uma ungeke ukwazi ukuthola izinsimbi ncamashi, ingabe ufuna okuthile okulingana ne-Cocker spaniel noma inja engumalusi waseJalimane?
Lokhu kuhlobene nombuzo wokugcina, kepha akuxhomekile impela kuwo - kungenzeka ukugcina inja enkulu esikhaleni esincane, inqobo nje uma ungabanika amathuba amaningi okuzivocavoca umzimba ngaphandle kwendlu noma ifulethi. Kepha khumbula ukuthi uma indlu yakho incane kakhulu, iNewfoundland ingathatha yonke indawo etholakalayo.
Ngakolunye uhlangothi, ezinye izinhlobo ezinkulu kakhulu azisebenzi ngenkathi abazala babo abancane bezolokhu behamba. Lowo Newf uthatha wonke umugqa wegumbi lokuphumula, kepha angavele enze kangcono lapho kunokuthi, iJack Russell terrier, inja encane esebenzayo kakhulu.
Ungayinikeza kangakanani le nja ukuvivinya umzimba?
Abanye bangathola ngokuhamba okufishane; abanye badinga ukugijima amahora nsuku zonke. Bheka ngobuqotho lokho ozimisele nokukwazi ukukwenza nenja yakho.
Qiniseka ukuthi ucabangela kokubili ishejuli yakho namakhono akho ezemidlalo: Uma ungathanda inja esebenzayo kodwa uhlelo lwakho lomsebenzi lukugcina umatasa amahora angama-70 ngesonto, ungayitholi inja esebenzayo. Angakujabulela ukuya kuma-run nawe ngezimpelasonto kodwa uzoba lusizi (futhi mhlawumbe abhubhise) ngesikhathi sokusebenza lapho ungenaso isikhathi sokumvocavoca.
Inja izohlala kuphi?
Abantu abaningi bazizwa ngokuqinile ukuthi zonke izinja kufanele zihlale endlini, futhi cishe noma iyiphi inja izokwenza kahle ngaphakathi uma inikezwa ukuzivocavoca umzimba ngokwanele. Uma inja yakho izosebenzisa isikhathi esiningi ngaphandle, kufanele ucabangele isimo sakho sezulu lapho ukhetha uhlobo - abanye abakwazi ukubekezelela ukushisa, kanti abanye abakwazi ukuphuma emakhazeni.
Uma inja yakho kufanele ihlale ngaphandle, qiniseka ukuthi inendawo yokuhlala eyanele (ebiyelwe, emboziwe, mhlawumbe eshubile), futhi wenze umzamo owengeziwe wokuchitha isikhathi nabo. Futhi ungalindeli ukuthi inja yakho yaseBernese enkulu, emnyama, eboshwe kakhulu izohlala ngaphandle elangeni lasehlobo.
Uzimisele kangakanani ukuzilungisa?
Ngabe uzimisele ukuchitha isikhathi esidingekayo ukugcina ijazi elithambile elide lingenamathanga namata? Kuthiwani ngemali yokuba nenja elungiswe ngobungcweti futhi isikwe njalo - yithi, njalo emavikini ayisithupha ngezinhlobo ezingachitheki njenge Imvu yezimvu ?
Ngisho nezinja ezinakekelwa kahle kakhulu zingahamba ngezikhathi zokuchithwa okukhulu lapho amajazi abo adinga ukunakekelwa okwengeziwe. Futhi zonke izinja, ngisho nezingenazinwele, zidinga ukunakekelwa izinzipho, amehlo nezindlebe.
Uhlela ukwenzani nenja yakho?
Ingabe ufuna amazambane ombhede oqotho? Uzakwethu wokugijima? Inogada enhle? Noma ufuna ukuqala ukuhlola imisebenzi eminingi ongayenza nenja yakho - izinto ezinjengokulalela, ubukhali, ukuhamba izintaba, ukwalusa, ukuzingela, noma okunye okunye okuningi laphaya?
Lokhu kuzothinta ukukhetha kwakho kohlobo ngoba, ngokwesibonelo, izinhlobo eziningi zamathoyizi azenzi izinja ezinhle zeFrisbee.
Yikuphi okuhlangenwe nakho okudlule onakho ngezinja?
Lo mbuzo akufanele uthathwe ukuphakamisa ukuthi akufanele uthole inja uma ungakabi nayo - wonke umuntu unenja yokuqala ngesikhathi esithile. Kepha kunezinhlobo ezinganconyelwe abanakekeli bezilwane okokuqala ngqa.
Uma uke waba nezinja ngaphambili, cabanga ngalokho okuthandile ngazo - kungaba wusizo oluwusizo, ngoba akekho ongancoma i-collie yomngcele kumuntu obelokhu ethanda isimo sengqondo esikhululekile se-basset hound kamama nobaba.
Uma unezingane, ingabe ukulungele ukufundisa izingane kanye nenja ukuthi zibekhona ngokuthula?
Izingane nezinja zingenza inhlanganisela emangalisayo… noma embi kakhulu. Udinga ukuchitha isikhathi uqeqesha zombili inja futhi izingane ziphathane ngendlela efanele.
Umbuzo ojwayelekile uthi 'Yiziphi izinhlobo ezinhle ezinganeni?' Impendulo ithi kuncike kakhulu ekutheni inja ikhuliswa futhi yaqeqeshwa kanjani. Ukuqondiswa - ngisho nezinja ezinhle ezinganeni - kufanele. Ukuthi inja inhle ngezingane akuyona ilayisensi yezingane zokuhlukumeza inja. Yonke inja izoba nephuzu layo lokwephuka.
Uma ungaqiniseki ngekhono lakho lokuqeqesha imidlwane emincane kanye / noma izingane kulokhu, ungahle uthande ukucabanga ukulinda kuze kube yilapho izingane sezikhulile, noma uthole inja endala eyaziwa ukuthi inezingane ezinhle bese uyiqondisa.
Yimuphi “umsebenzi” ofuna inja yakho ukuwazi?
Uma usuvele unezinhlobo ezimbalwa engqondweni, ungakhohlwa ukucabanga ngomsebenzi abazalelwa wona. Kukhona izinhlobo ezimbalwa kuphela ezazisungulwe ekuqaleni zaba yizilwane ezifuywayo. Izinja eziningi ekuqaleni zazizalelwa abazingeli, abelusi, onogada, noma omunye umsebenzi ongahle uphikisane nalokho okulindele esilwaneni.
Uma ingadi yakho ibaluleke kakhulu kuwe, ungahle ungafuni ukuthola i-terrier; cishe bonke bazokumba. Uma ungenaso isikhathi sokuzivocavoca inja, ungatholi i-dalmatian, noma yiluphi uhlobo lwesikhombi noma i-retriever, noma izinhlobo eziningi zokufuya - zonke lezi zinja zazalelwa ukuhamba amamayela namamayela ngaphandle kokukhathala. Futhi noma bengekho abaqeqeshi okufanele bagadwe, bengekho izinyoni abazitholayo, futhi kungekho zimvu ezizolandwa, basalangazelela ukuzivocavoca futhi bazothola izindlela zokukwazisa uma bengatholi ngokwanele.
(Izinja zami ezimbili zokwalusa zithanda kakhulu kakhulu ukulingana kwasebusuku kakhulu kunoma yiluphi usuku lapho bengatholi ihora noma amabili wokuzivocavoca kanzima. Ngifunde ukuqiniseka ukuthi bathola ukuzivocavoca.)
Okulandelayo, engxenyeni 2, sihlola okufanele ukwenze uma usuthole uhlobo lwakho noma ukuxubeka kwakho.
Ingxenye 2: Ngemuva Kokuthola Inja Yakho » Amakhasi:1 2 Ukuzulazula kokuthunyelwe
Usizi Nokulahlekelwa Kwezilwane: Umhlahlandlela Ophelele
I-Wire Haired Dachshund: Imidlwane, Abafuyi & Umhlahlandlela Wokuzala
amagama amahle ezinja zezinsikazi zama-pitbulls
kungani inja yami yomile ukukhuphuka njalo?
kuhlangana isikhathi esingakanani amamiksi husky
inja yokuzalwa enemivimbo yengwe